Abenza uBen Foster noLaura Prepon baye baba abazali abajabulayo!
Izihloko zezincwadi zakwamanye amazwe zinezindaba ezimnandi, kuphela esikufunde ngokuvuselelwa komndeni kaLionel Messi, kwaziwa ukuthi ngo-Agasti 24 umbhangqwana odlala umlingisi uLora Prepon noBen Foster baba ngabazali bentombazane. Umbhangqwana ojabulayo ujabulela imizuzu yokuqala namahora wesimo sabo esisha, futhi abangane babo bahlukanisa amafoni ngokuhlanganyela izindaba nabomagazini namathebhuthi. Owokuqala mayelana nokuzalwa kwendodakazi yakhe utshele izintatheli Us Us Weekly, ngokubhekisela kubamele abamele izinkanyezi.
Abahlali babika ukuthi ukuzalwa kwaqala ngokuzumayo endaweni yokudlela, uLaura washiya emanzini kanti lo mbhangqwana wahamba ngokuphuthumayo emtholampilo. Ekuseni kwaziwa ukuthi uPrepon and Foster baba abazali!
Ngokushesha ngaphambi komcimbi osalinde isikhathi eside, uLaura wabelane ngemizwa nemizwelo yakhe ku-American Live TV show! noKelly noRyan:
Izimpukane ezisheshayo isikhathi eside, kubonakala sengathi yilokho esamemezela ukukhulelwa kwami ​​ngoJanuwari futhi sekusele ngenyanga yesishiyagalombili! Angisakwazi ukukukholwa. Izingane sezivele zikhahle ngokugcwele futhi ngicabanga njalo: "Nkulunkulu wami, maduzane uzozalwa." Lena umuzwa omuhle, ngiyabonga ukuziphatha ukuthi ngizobe ngimama ngokushesha.
ULora Prepon noBen Foster balinde ingane yokuqala
ULora Prepon noBen Foster bayeka ukufihla uthando lwabo
Ukubuya okulindelwe isikhathi eside kukaProfesa Langdon: UTom Hanks enkundleni ethi "Inferno"
Khumbula ukuthi ubuhlobo bomshado babuyisimanga esikhulu kubo bonke abalandeli, ngoba uLaura wayehlala emshadweni womshado iminyaka engu-7 noChristopher Masterson, noBen babe nobudlelwano noRobin Wright. Ngemuva kokudlula ubudlelwano obudlule, baqala ukuhlangana ehlobo eledlule, bahlanganyela ekuwa, kanti ngoJanuwari bamemezela ukuthi bazoba abazali ngokushesha.
Siyakuhalalisela umbhangqwana wezinkanyezi futhi silindele ukuphawula okusemthethweni okuvela kubalingisi futhi, yiqiniso, izithombe zokuqala.
UBar Raphaeli waqala waba umama
UNkosana uHarry uqale wakhuluma enkulumweni esemthethweni igama elithi Megan Markle
UKeira Knightley wazala ingane
Abathandi abazange bavume ukhetho lweMelania Trump izingubo zokuvakashela isikhumbuzo "Izisulu Zama-opioids"
UCharlotte Casiraghi ukhulelwe nomyeni wakhe waseRussia
UKylie Minogue noJoshua Sass
UCher uzobamba iqhaza ekuqopheni umdwebo othi "Mama Miya!"
Ubuhle u-Ashley Graham udansa "umdanso oshisayo" we-negligee
Yini ongayikhipha eHong Kong?
Kulungile kanjani ukubopha isifuba?
Iphunga elivela emlonyeni wenja
Ungamamathela kanjani ingane ukuze ukhonkwane ngeminyaka engu-10?
Ukuthenga eLos Angeles
Phuza nge-mint nelamula
Ukungahambi kahle kwe-Urinary kwabesifazane - kubangela futhi ukwelashwa ngamaphilisi namakhambi omuntu
Izinkinobho - izinto ezintsha zonyaka wesimodeli ka-2016
Izinkulungwane zezinwele ezimhlophe ekubetheni izithombe nge-albinos